Quick test for individuals - IsiZulu
SARS Home > Types of Tax > Turnover Tax > How to Register > Quick test for individuals - IsiZulu
UHLOLO OLUSHESHAYO LWABANTU & NEZINKAMPANI
Ngokuphendula le mibuzo elandelayo uzokwazi ukuthola uma ibhziinisi linazo izidingo zokufaneleka ukubhalisela intela yengenisoqoqa.
Uma impendulo yomunye wale mibuzo ingu “CHA”, ibhizinisi lelo angeke lafaneleka ekubhaliseni intela yengenisoqoqa lonyaka wopkubuyekeza.
Omdibi munye kubudlelandawonye angeke afaneleka “kwintela yengenisoqoqa”. Laba abanye abamdibi kunye naye bangafaneleka uma bengamalungu obudlelandawonye obubodwa futhi bengaphenduli ngo “Cha” komunye wemibuzo engezansi.
Sicela uthathisele ku-Tax Guide for Micro Businesses ngosizo lokuphothula lolu hlolo.
​Ingabe “ingenisoqoqa elifanele” lebhizinisi lingaphansi kumbe lifinyelela ku- R1 million onyakeni wokubuyekeza?
​Uyaqinisa ukuthi ibhizinisi kaliyena “umhlinzeki wokuzisiza siqu” kumbe “umhwebi ngemisebenzi” ongenasitifiketi sokuxegiselwa sakwa-SARS?
​Ingabe ibhzizinisi lihweba ngenye lezi zindlela: umhwebi ongayedwa, i-close corporation, umfelandawonye kumbe njengenkampani?
​Uma ibhizinisi lingubudlelandawonye, uyaqinisa ukuthi bonke abamdibi bangabodwana unyaka wonke wokubuyekeza?
​Uma ibhizinisi liyi-close corporation, umfelandowonye kumbe inkampani, uyaqinisa ukuthi bonke abaninimasheya/amalungu azokuba ngabantu abangabodwana unyaka wonke wokubuyekeza?
​Uyaqinisa ukuthi ibhizinisi kaliyona inhlangano yokuzuzisa umphakathi, iqembu likaqedisizungu, usoseshini wabantu kumbe isikhungo sokusimamisa amabhizinisi amancane?
​Ingabe ibhizinisi linonyaka wokubuyekeza ophela ngosuku lokugcina lukaNhlolanja?
​Uyaqinisa ukuthi umnini, omdibimunye, abaninimasheya, amalungu kanye nebhizinisi uqobo kabanawo amasheya/ingxenye kwi-close corporation, inkampani, kumbe umfelandawonye ngaphandle kwalokhu okuxegiselwe okulandelayo:
Izinkampani ezisohlwini zaseNingizimu Afrika;
Izikimu Zokutshala imali ndawonyes;
Ama-Body corporates kanye nezinkampani ezinamasheya angumthamo;
Izinkampani eziyizilulu zabatshalimali;
Ngaphansi kuka- 5% wemifelandawonye yomphakathi noma kamasithengisane;
Ngaphansi kuka- 5% wemfelandawonye yomasingcwabisane kumbe yamabhange okuqongelela nezitokofela;
Noma yiyiphi enye inkampani engazange yahweba kunoma yimuphi unyaka wokubuyekeza futhi engabanga nampahla enenani eledlule ku- R5 000 onyakeni wokubuyekeza;
Noma yiyiphi inkampani esithathe amanyathelo okuncibilikisa, ukuhlanganisa inani lokuvala kumbe ukuzikhipha ekubhalisweni?
​a) Uma ungumuntu wendalo, ingabe uyaqinisekisa ukuthi ingenisomali elivela ngokunika “imisebenzi yobungcweti” kakulindelekile ukuba yedlule u-20% wokutholile onakeni wokubuyekeza
b) Uma ibhizinisi liyinkampani, i-close corporation kumbe umfelandawonye, ingabe uyalidalula na lelo ngenisomali “lemisebenzi yobungcweti” kanye “nelotshalomali” kakulindelekile ukuba kweve ku-20% wesamba sokutholile onyakeni wokubuyekeza?
​Uyaqinisekisa ukuthi ingenisomali elivele ngempahla ededeliwe yibhizinisi onyakeni wokubuyekeza kanye naseminyakeni emibili yokubuyekeza edlule kayilindelekile ukuba yeve kwisamba esingu R1.5 million?
​Uyaqinisa ukuthi ibhizinisi lelo alikaze ngaphambilini libhaliselwe Intela Yengenisoqoqa?
Last Updated: 19/01/2018 10:55 AM ​